Honey - umkhiqizo evelayo ngenxa ukucutshungulwa ngokwengxenye umpe izinyosi. Emvelweni, kuba lezi Ukudla izinambuzane - eqoqwe ehlobo yokudla isidleke kulo ebusika.
Honeys kuhluke egqamile, iphunga elinamandla futhi viscosity. Njengoba izinyosi ukuqoqa umpe kusuka izitshalo ezahlukene, ngenxa izinhlobo ezahlukene umkhiqizo etholakala. Ukudayiswa zingatholakala dimorfantovy uju, nokunye okufana nokolweni, umtholo, dandelion, Maple nabanye. Ngokuvamile izophasa okuxubile, njengoba izinambuzane ukubutha umpe kusuka izimbali ezihlukahlukene. Igama okunikezwa isitshalo, umpe kusuka kulo kakhulu.
Indlela zenza uju
Ngaphambi abe umngane bonke umkhiqizo, umpe noma uju ngokusebenzisa izigaba eziningana. Ngemva lokuqoqa umpe izinambuzane ezibekwe esitokisini sakhe, kancane kancane enezela ngaphezulu nokuningi kuze iseli alaneliswa ngokuphelele. Inqobo nje uma le nqubo, abasebenzi ezimthende njalo wanezela kuya kwezokwelapha imfihlo nezindlala yabo.
Ngaphansi kwethonya enzyme umpe kabusha, ngokweqile ehwamukile amanzi, ubola sucrose ku fructose kanye glucose. Phakathi nalesi sikhathi, izinyosi ngokuphindaphindiwe uthumele umkhiqizo kwiseli uye kwenye. Lapho amanzi uju kuyoba esingaphansi 21%, isinambuzane wax uphawu iseli ngesivalo. It - isivele ngomumo, sesivuthiwe futhi umkhiqizo ezidliwayo.
Njengoba izinyosi zenza uju kusukela umpe hhayi kuphela, kukhona izinhlobo ezimbili imikhiqizo yemvelo: imbali, okuyinto Yenziwe umpe uju - kusuka uketshezi elimnandi aphid nezinye izinambuzane ezithwala kanye uju. Bobabili ewusizo, nakuba i-uju isinambuzane asifanele - kuba anobuthi kubo.
Ukwakheka kanye izakhiwo bathembele kakhulu ku "umsuka" - kuyiphi lesi sitshalo behlangene, uma kuvuna kahle futhi agcinwe. Honey bee kwezinhlobo eziningi has elwa namagciwane, eqeda ukuvuvukala, izindawo amanxeba. Ezinye izinhlobo ngempumelelo yokulwa isikhunta, kuyilapho abanye bayakwazi ukulungisa ingcindezi futhi ukugaya.
Gynecological ziwusizo ikakhulu - lime, melissovy futhi izimbali zasendle. umphumela Namandla amagciwane e clover amnandi, umcako, usika izingcezu azidingayo ngokucophelela uju.
Against streptococci, staphylococci nezinye amagciwane igramu-HIV, ngokuvumelana S. Mladenov nabanye, lime ezinhle, Lopukhov, alfalfa, i-clover, ne-Acacia.
Kodwa phakathi kwazo zonke izinhlobo zezitsha dimorfantovy uju. Izinyosi kusukela umpe ukulungiselela ayo kalopanax semilopastnogo - ezingavamile, isihlahla relict, okuyinto lukhula kuphela ezingxenyeni ezithile Japan, China, le nhlonhlo isiKorea, Sakhalin kanye Kuril Islands. Lena enye yezinhlobo ezingu kwezinhlobo zezinyoni ezingavamile kakhulu futhi esiyigugu, it has a anti-microbial eqinile, ukuvuvukala, amaphilisi ezinhlungu kanye nezinye izakhiwo.
Kalopanax semilopastny noma dimorfant
Lo muthi relict, okuthiwa futhi ziyadliwa esimhlophe, noma iva-isihlahla. Wayefanele ezinkulu, ezibanzi futhi amaqabunga amahlanu semilopastnye, emagxolweni grey ukukhanya spiked (ebusheni bakhe) kancane kancane iphenduka ibe mnyama futhi ezimazombezombe (in the "omdala" yobudala).
Umuthi uhlala kuze kube iminyaka engu-200, futhi kuba impela finicky nekhathazayo - ungavumelani njalo sikhule ngisho ezindaweni lapho lezi zitshalo zivamile. Afakwe Red Encwadi WaseRussia. Blooms kanye njalo ngemva kweminyaka embalwa.
kalopanax esihlahleni ngokwayo - umuthi ezibalulekile. Ngo Folk imithi, it is zenani Bast, izimpande, efihlekile kanye namahlamvu. Isenzo spectrum ubanzi kakhulu - kuhle kakhulu ngokumelene isikhunta, elwisana umdlavuza, isifo sikashukela, upholisa, amathoni futhi uvikele isibindi.
It has anti-iguliswa, anti-microbial, anti-oxidant, izakhiwo eqeda ukuvuvukala. Izinkuni "ziyadliwa esimhlophe" lalikade lisetshenziswa njengendlela impahla eluhlaza for ifenisha kanye umhlobiso ingaphakathi.
anempilo uju isitshalo
Isethi enkulu ayelapha has honey bee kuwo. Njalo ngemva kweminyaka emine, isihlahla ancibilikisa izimbali ezimhlophe-yellow ziqoqwa zibe florets ezinkulu. Izinyosi ngenjabulo umpe kuzo - bagcina imithi multi-functional, uzilungiselele ngokwemvelo.
Umkhiqizo kusukela kalopanax umpe - eqinile anti-njengemithi yokungezwani komzimba nokuthile, tonic, ivuselela. Ngenxa izakhiwo zalo anti-inflammatory futhi elwa namagciwane, ungasebenzisa lwezinyosi ukukhwehlela kanye emphinjeni. It enza yonke ipheshana wokugaya ukudla, i-hormone uyakwazi sishukumisa umzimba futhi umsebenzi ngokwengqondo ngaphandle kokuphazamisa ingcindezi.
Ngempumelelo ngokumelene ukuvuvukala futhi yokujama tsi emisipheni, kuthuthukisa microcirculation futhi kusiza izifo zenhliziyo nemithambo yegazi.
uju Dimorfantovy - lokuthola usizo oluyilo ezinkantolo kakhulu ekwelapheni isifo sokusha kwesibindi kohlobo oyingozi futhi ezingalapheki, kusiza utshwala poisoning, kunomphumela anobuthi. Ngenxa yezimpawu ezinothile izinto eziphila abakhuthele ukubunjwa yayo, umkhiqizo uba yinto enhle kakhulu anti-malarial, i antifungal, opholile kanye ejenti hepatoprotective.
Umkhiqizo kusukela umpe we "ziyadliwa esimhlophe" muhle ekwelapheni utwayi, umbandamu, izilonda, amathumba, angawokuphulukisa amanxeba kanye nezilonda. Abaphilileyo kufanele nizame uju - elisetshenziswa ukudla kwandisa ukumelana nezifo, kuthuthukisa impilo jikelele, potency anda kanye nokusebenza.
Konke lokhu ndawonye okwenza kube imithi jikelele. I apitherapy it is bewazisa kakhulu, naphezu kweqiniso lokuthi zonke izinhlobo uju, eqinisweni, - nemithi.
Impendulo kulabo abaye bazama ke, ngeke kube kudidaniswe yini enye - it has a ukunambitheka esiyingqayizivele kakhulu futhi original. Mhlawumbe isikhathi eside, iminyaka eminingi, aqhubeke ewuketshezi. It crystallizes kancane kakhulu, bayilethe mass okuncane. Uju dimorfantovy esobala, nesigayegaye, ukunambitheka kwako siqu eliyingqayizivele.
izitolo Inthanethi Russian ukunikela ukuqoqwa ngo-2014 ngenani ruble 550 ilitha. Ukuze uqhathanise, imbali (kusuka izinhlobo ezihlukahlukene zezitshalo, wokuvuna 2013, kusukela umdayisi efanayo) - ruble 275, leli hlathi (2014) - ruble 247, noma kusuke Linden - ruble 176.
Amanani ayahlukahluka izikhathi eziningana - kwezinye chain ezitolo intengo 1 kilogram isivele ruble ezingaphezu kuka-1000. Abanolwazi abathandi uju belulekwa ukuba ukuthenga uma unga, ngoba le blooms umuthi kanye njalo eminyakeni embalwa, futhi yonke isitokwe kusuka umdayisi Ungaqeda ngokushesha.
Indlela ukuhlukanisa umkhiqizo bangempela ovela inkohliso
Okuwukuphela nandlela ukuhlukanisa kusuka kwamanye kalopanax yezokwelapha - Cela uchwepheshe. Intengo akusho lutho - ezinye isiqinisekiso inganikelwa kuphela idumela umdayisi, izitolo ungafuni amaklayenti sina ingozi.
Nokho, abahwebi yangasese - enye indaba. Kunezindlela eziningi imikhiqizo inkohliso - Shintsha umbala, ukujiya, futhi ukuthungwa, enezele futhi flavour entsha noma ukuthuthukisa esivele sikhona.
Thola uma kukhona ukungcola, kungenzeka, usebenzisa elula amakhemikhali ukuhlolwa, nakuba siqiniseka ngokugcwele kuphela ukuhlaziywa laboratory kuthanda. kalopanaksovogo ibheji ue ingase futhi adayise mbumbulu noma enye, ezihlukahlukene eshibhile. Ukukopela ngale ndlela kungaba abantu, akazange azame uju dimorfanta ngaphambili, kodwa isiphetho main namanje okufanayo - ukwethembana kuwufanele kuphela sina, nokuba nedumela lokungathathi yezitolo futhi abafuyi bezinyosi.
Izithelo Exotic Pamela
Indlela esindayo kuyinto ilitha uju? Umthelela nesisindo izinga uju
Imbewu "Gene" - magic ngempela noma nje "Puff"?
Izinhlobo wezinsimbi. Yiziphi izibopho ukubunjwa amathuluzi?
Izindleko Ukuhlaziywa ngokuqashisa eSpain ehlobo 2011
Kwe-dielectric Heating - kuyini? izakhiwo Kwe-dielectric Heating
Ukukhanya okuphansi: izici sokunquma kanye namazinga